कांग्रेस सभापतिमा फेरि देउवा नै किन ? - Sankalpa Khabar
को–को बन्लान देउवाको प्रतिश्पर्धी ?
७ असार २१:१३
नेपाली कांग्रेस भित्र १४ औं महाधिबशेनको माहौल सुरु भइसकेको छ । कोराना महामारीका कारण अगामी भदौ भित्र १४ औं महाधिबशेन सम्पन्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योलताका कारण माहौल तात्न पाएको थिएन । असारको पहिलो साता देखि नै कोरोनाको महामारी कम हुँदै गएको छ भने सभापति शेरबहादुर देउवाले १४ औं महाधिबशेन आगामी भदौ भित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको छ । भदौभित्र महाधिबशेन हुँदैनकी भनेर कल्पना समेत नगर्न सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमै निर्देशन दिनु भएको छ ।
महाधिबशेन भदौ भित्रै हुने सुनिश्चित भए सँगै स्वभाविक रुपमा चुनावी माहौल सुरु भएको छ । सभापतिका आकांक्षीहरुले आफ्नो तयारी सुरु गरेका छन् । सभापति देउवाले पनि असार ५ गते शनिबार बिहान प्रदेश १ का केन्द्रीय सदस्यहरु तथा प्रभावशाली नेताहरुलाई बोलाएर परामर्श आरम्भ गर्नु भएको छ । सबै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरु सँग एक चरणको छलफल सकेपछि औपचारिक रुपमा उमेद्वारी घोषणा गर्ने सभापति देउवाको तयारी छ।
परामर्शका क्रममा सभापति देउवाले भन्नु भएको छ –‘कांग्रेसले संविधान जारी गरेपछि मेरो नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयनका काम सुरु भए । मैले तीन तहको चुनाव गराएँ । हामीले कम सिट जित्यौँ । तर, पहिलेभन्दा लोकप्रिय मत पाएका थियौँ । अब पार्टीलाई मुलुकको पहिलो पार्टी बनाउनुपर्नेछ । मुलुकलाई संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडाउनु पर्नेछ । त्यसैले एकपटक मैले नै सभापतिमा उम्मेद्वारी दिने सोचेको छु । तपाईंहरूको राय के छ ? मलाई सहयोग गर्नुप¥यो ।’ देउवाले अगाडि भन्नु भयो –‘अब म मेरै नेतृत्वमा यो पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो बनाउँछु र सरकारको नेतृत्व गरेर कांग्रेसको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउँछु ।’
देउवाको भनाइलाई स्वागत गर्दै उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले भन्नु भयो–‘म सभापतिज्यूसँगै छु, सघाउँछु । म विभिन्न अप्ठेरोमा छु, तैपनि मैले सक्ने सहयोग गर्छु, तपाईं हाम्रो सभापतिको उम्मेदवार बन्नुपर्छ, हामी तपाईंलाई सघाउँछौँ ।’ अर्का उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने गत १३ औं महाधिबशेनका क्रममा भएको सहमतिको प्रसंग निकाल्दै सभापति पदमा आँफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भयो । निधिको भनाई थियो –‘हामीले तपाईंलाई सहयोग गर्दै आएकै छौँ । अब मेरो पनि उमेर भयो । भोलि १५औँ महाधिवेशनमा अरू साथी पनि आउँछन् । त्यो वेला अर्को परिस्थिति बनिसक्छ । त्यसैले अब मलाई मौका दिनुहोस् । म तपाईंको सहयोगमा सभापति बन्न चाहन्छु । मैले पहिले पनि तपाईंलाई भेटेर भनेको हुँ पार्टीको सभापतिमा मलाई मौका दिनुस भनेर । म पार्टी चलाउँछु । बरु तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस् ।’ निधिको आग्रह पछि जवाफ दिँदै देउवाले भन्नु भयो–‘पार्टीको सभापति त जो पनि उठ्न पाउँछ, मैले नउठ्नुस् भन्दिनँ । तर, मैले पनि तयारी गरिसकेँ, मलाई सघाउनुस् भन्ने मेरो कुरा हो ।’
देउवा उमेद्वार बन्ने सन्दर्भमा संस्थापन पक्षमा खासै बिवाद छैन । अबको पाँच वर्ष पछि हुने १५ औं महाधिबशेनमा आफ्ना लागि पूर्वाधार बनाउन निधिले अहिले इच्छा जाहेर गर्नु भएको हो । देउवासँग विद्रोह गरेर अघि बढ्दा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा आफ्नो भूमिका समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा निधि जस्तो चतुर नेताले नबुझ्ने प्रश्नै छैन । देउवा सँग विद्रोह गरेर अघि बढ्दा आफ्नो राजनीति के हुन्छ ? सहमति गरेर अघि बढ्दा के हुन्छ ? भन्ने हिसाव किताव निधिलाई राम्रो सँग थाह छ । पाँच वर्ष प्रतिक्षा गर्ने गरी अहिले निधि पछि सर्दा देउवाको जित सुनिश्चित छ । देउवाले जितेपछि अहिले जस्तै पार्टी चलाउने निधिले नै हो । पाँच वर्ष पछि पालो आउने निधिकै हो । त्यतिबेला निधिलाई देउवाले हरतरहले सहयोग गर्ने सुनिश्चित छ । किनकी पहिलो कुरा दुई कार्यकाल भन्दा बढी लगातार सभापति बन्न नेपाली कांग्रेसको विधानले दिँदैन, दोस्रो कुरा १५ औं महाधिबशेनपछि सक्रीय राजनीतिका लागि उमेरले पनि देउवालाई साथ दिँदैन । यो कुरा चतुर खेलाडी निधिले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ ।
निधिले विद्रोह गर्लान र आँफुहरुलाई चुनाव जित्न सजिलो होला भन्ने आंकलनका साथ इतर पक्षका करिव आधा दर्जन नेताहरुले सभापति पदको उमेद्वारी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । संस्थापन इतर पक्षमा को उमेदरवार बन्ने ? भन्ने विषयलाई लिएर ठूलै रडाको मच्चि सकेको छ । डा. शेखर कोइरालाले प्रचार प्रसार थालेको दुई वर्ष वितिसकेको छ । कुनै हालतमा पछि नहट्ने अडानमा शेखर कोइराला हुनुहुन्छ । प्रकाशमान सिंहले पनि सभापतिमा उमेद्वार बन्ने बताई रहनु भएको छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेतृ सुजाताको पनि दावी छ । १३ औं महाधिबशेनमा देउवा सँग फराकिलो मत अन्तरले पराजित हुनुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आफ्नो दावी छाडेका छाड्नु भएको छैन । कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगतमा जस्तै संक्षिप्त टिम बनाएर च्याखे दाउ थाप्ने संभावना पनि त्यतिकै छ ।
अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा सबै भन्दा सुरक्षित अवस्थामा सभापति देउवा हुनुहुन्छ । उपसभापति निधिको व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा १३ औं महाधिबशेनको भन्दा देउवाका लागि अझै सुरक्षित अवस्था छ । पहिलो कुरा त देउवाको प्रतिस्पर्धी समुह गत १३ औं महाधिबशेनको जस्तो एक ढिक्का छैन । करिव करिव छिन्न भिन्न भइसकेको अवस्था छ । दोस्रो कुरा साँढे पाँच वर्ष सभापतिको कार्यभार संहाल्दा पार्टी संगठन भित्र सभापति देउवाको साख र पहुँच निकै बढेको छ । तेस्रो कुरा कम्तिमा दुई कार्यकाल सभापति बन्ने नेपाली कांग्रेसमा परम्परा नै बसिसकेको छ । नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि वीपी कोइराला र गणेशमान सिँहको मार्गदर्शनमा यो परम्परा बसेको हो । २०४८ सालमा झापाको कलवलगुढीमा भएको आठौं महाधिबेशनमा बहालबाला सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिस्र्धाको तयारी गर्नु भएको थियो । कोइरालाले चुनाव जित्ने अवस्था पनि थियो,तर सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले हस्तक्षेप गर्दै भन्नु भयो –‘कम्तिमा दुई कार्यकाल नहेरी नेतृत्वको परीक्षण हुँदैन, छिटो छिटो नेतृत्व परिवर्तन गर्दा पार्टी संस्थागत हुँदैन, त्यसैले किसुनजीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि अवशर दिनुपर्छ ।’ यसरी आठौं महाधिबेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको थियो । त्यो हिसावले दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति बन्नु देउवाको जिम्मेवारी र कर्तव्य मात्रै होइन अधिकार नै हो । त्यसैले १४ औं महाधिबशेनद्वारा देउवा सर्वसम्मत सभापति बन्ने संभावना जिवित छ ।
चौथो कुरा नेपाली कांग्रेसको साखलाई थप उचाइमा पु¥याउन देउवाले अरम्भ गरेका कतिपय कामहरु अधुरा छन् । १३ औं महाधिबशेनद्वारा सभापति निर्वाचित भए लगत्तै सभापति देउवाले कांग्रेस पार्टीलाई सरकारमा पु¥याएर संविधानलाई मधेसी दलको पनि समर्थन प्राप्त हुने वातावरण बनाउनु भयो । डेढ वर्षभित्र तीन बटै तहको निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वनको दिशामा उल्लेख्य उपलव्धी हासिल गर्नु भयो । विपक्षीहरुले गठवन्धन गरेका कारण सिट संख्याको हिसावले नेपाली कांग्रेस तल परे पनि पार्टीको पक्षमा जनमत भने देउवाले उल्लेख्य बढाउनु भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २३ प्रतिशत मात्रै भोट पाएको थियो । सुशील कोइराला सभापति हुँदा २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २९ प्रतिशत मात्रै मत पाएको थियो । तर देउवा सभापति बनेपछि २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३५ प्रतिशत मत हासिल गर्‍याे । यो मत भनेको वीपी कोइराला सभापति हुँदा २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले हासिल गरेको मत बराबर हो । यति छोटो अवधीमा पार्टीको पक्षमा यति ठूलो जनमतको बृद्धि गर्न कांग्रेसका थोरै सभापति मात्रै सफल भएका छन् । आगामी निर्वाचनमा पार्टीका पक्षमा कम्तिमा ४० प्रतिशत जनमत पु¥याउने र बहुमत सहित सत्तामा आसिन गराउने कार्ययोजना सभापति देउवाले पेश गरिसक्नु भएको छ । यो संभावना देखिएको पनि छ । बाम गठवनधन भई कांग्रेस भन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा उदाएको नेकपाको विभाजन संयोग मात्रै होइन भन्ने कुरा कांग्रेसको पार्टी पंक्तिले बुझिसकेका कारण देउवालाई १४ औं महाधिबशेनद्वारा सभापति जित्न खासै ठूलो समस्या छैन ।
यसैगरी देउवाले चुनाव जित्ने सबै भन्दा बलियो आधार भनेको उहाँको अनुभव हो । उहाँ २०५७ सालमा पोखरामा सम्पन्न दशौं महाधिबशेन देखि लगातार सभापति पदमा चुनाव लड्दै आउनु भएको छ । सभापति पदका लागि अब देउवा पाँचौ पटक उमेदवार बन्दै हुनुहुन्छ । तर वरिष्ठ नेता पौडेल बाहेक एक पटक सभापति पदमा उमेदवार भएको अनुभव कांग्रेस भित्र अरुको छैन । विगत २१ वर्षदेखि कुन कार्यकर्ताको मन कसरी जित्नु पर्छ ? भन्ने अनुभव हासिल गरेको कारण मात्रै होइन ४ पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाउनु भएका देउवाको उचाईका अगाडि कांग्रेसका अरु नेताहरु निकै फुच्चे छन् । देउवा आँफैमा संस्था बनिसक्नु भएको छ ।
प्रचण्ड-माधव आज पनि भेट, के माधव सरकारमा जान्छन ?
१७ श्रावण १४:०७
भारतीय एसएसवीले तुइन काटदा दार्चुलावासी गायव भएपछि कांग्रेसले माग्याे…
१५ श्रावण २०:४२
जसपा कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै, महन्थसहित १६ जनाको ठाउँमा…
१३ श्रावण ०९:५४
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानासँग माग्यो स्पष्टीकरण
१४ श्रावण १२:५७
ओलीको वालकोटवाणले माधव खुत्रुक्कै !
१७ श्रावण १३:५३
शनिबारसम्म एमालेमा ‘वार कि पार’, ओलीले दिए निर्देशन
१४ श्रावण १४:११
माधव निवास कोटेश्वरमा प्रचण्ड
१७ श्रावण ११:४७